Ewu kreenu, kreenu igwe, kreenu ọrụ, engine kreenu - XJCM
XJCM bụ mba elu-tech enterprise nke na-professionally aghụghọ, na-arụpụta na-emekọ na ike ike teren kreenu, ụgbọala kreenu, ụlọ elu kreenu na ndị ọzọ na-ewu ígwè.
Onwe gi na-ewuli elu ulo elu
Rough teren kreenu
Na mgbakwunye na ngwaahịa ndị dị elu, XJCM na-enye ọrụ zuru ụwa ọnụ a pụrụ ịdabere na ya. Nke ahụ pụtara na anyị ga-ahapụ gị ka ị rụọ ọrụ n'enweghị nsogbu na nke ọma - ọbụlagodi n'ọnọdụ ndị dị oke njọ.
klọlọ elu ụlọ elu
XJCM ika 12 ton obere njiko mkpisi aka ọganihu ụgbọ ala kreenu
XJCM 80 ton mobile kreenu maka ọrịre
24 ọkpọkọ oyi akwa
XJCM ika Eweli eriri kreenu
XJCM ika 25 ton gwongworo na kreenu maka ire ere
30 Ton Na-eweli igwe siri ike teren kreenu
XJCM ika Onwe Loading na ebutu Sanitatio ...
Guzobe na 2002, Xuzhou Jiufa Construction Machinery Co., Ltd (XJCM). bụ ụlọ ọrụ na-ekenye òkè na ego itinye ego nke RMB16 nde. Companylọ ọrụ anyị na-ekpuchi ebe 53 puku mita anọ, 38 ọtụtụ puku n'ime ha bụ maka ọhaneze. Anyị na-onwem na ihe karịrị 260 ika-ọhụrụ na elu ụlọ ọrụ. Anyị ipuiche n'ichepụta nnukwu ihe owuwu nke ihe eji arụ ọrụ na ikike ikike kwa afọ anyị bụ 20 puku metrik tọn. A na-eji igwe ọgbara ọhụrụ maka njikwa ọnụọgụ, ịgbado ọkụ, ịkpụzi na ọgwụgwọ okpomọkụ na usoro nke mmepụta anyị. XJCM isi ngwaahịa ndị siri ike teren kreenu, gwongworo kreenu, onwe -erecting ụlọ elu kreenu, multifunctional pipelayer na ọtụtụ na-ewu ígwè akụkụ. Ha bụ n'ezie nke ụkpụrụ dị mma. Anyị RT usoro cranes, QY usoro ụgbọala kreenu na JFYT usoro ụlọ elu kranu na-exported ka North America. South America, Africa, Middle East, West Asia, Southeast Asia na ndị ọzọ karịa mba 30 na mpaghara.
The "RT usoro pụrụ-ụzọ kreenu" onwe nyochara na mepụtara site na ụlọ ọrụ a ghọtara dị ka "elu-tech ngwaahịa" site Science and Technology Department of Jiangsu Province na e depụtara na "National Torch Plan Industrialization Ngosi Project" site Ministry nke Sayensị na Nkà na .zụ.
XJCM ipuiche n'ichepụta nnukwu owuwu nke na-ewu machinery.We ọkọnọ excavator bọket, Loader bọket, rocker ogwe aka, booms, n'ihu osisi, n'azụ okpokolo agba, pin na-apụta na ndị ọzọ yiri ngwaahịa na XCMG, PAT, FOTON, LIUGONG, HELI forklift, YUTONG na ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ ama ama na China.
XJCM ika ọganihu maka cranes
Ebube azụ azụ
XJCM ọkọnọ Crane ọganihu
XJCM hazie All Model Wheel Loader Bucket
China Manufacturer Sale 2ton Iji 100ton Excava ...